GIS Manifold, wax dheeraad ah oo leh qaabab - Geofumadas
Oktoobar, 2012 GIS kala cayncayn ah
Muddo ka hor Waxaan ku hadlay maqaal sida daabacaada daabacaadda loo abuuray GIS kala cayncayn ah. Waqtigaas waxaan sameynay qaab-dhismeed si cadaalad ah u aasaasan, kiiskan waxaan rabaa inaan muujiyo mid ka sii adag. Tani waa tusaalaha khariidada wax soo saarka cilmiga beeraha; maaddaama khariidadda ugu weyn ay tahay isticmaalka hadda ka imanaya sawirka dayax-gacmeedka, xagga hoose waxay leedahay khariidadaha awoodda cilmiga agroloji ee Khariidadda Simmons iyo isticmaalka suurtagalka ah ee FAO.
Marka hore, waa muhiim in la fahmo qaabdhismeedka sheyga Manifold uu isticmaalo, sida aan sharxay maqaal hore, maaddaama shayadan la mid ah lagu soo rogay habka loo adeegsado sida ay u shaqeyso.
Tani waa lakabka vector, oo Manifold ku jira oo aan kala sooc lahayn, wuxuu ka koobnaan karaa qaabab isku dhafan, xariiqyo ama dhibco, maaddaama dhammaantood ay ku jiraan keyd xog-ururin leh kordhin .map ah. Sawir gacmeedkan wuxuu yeelan karaa caruur ahaan, matalaado kale sida:
Jadwalka, kaas oo ah muujinta shaxda lakabka. Tani waa mid gaar ah sawir.
Calaamadaha, kuwaas oo ah calaamadaha firfircoon ee duurka lagu soo bandhigay khariidada. Waad abuuri kartaa lakabyo badan oo calaamado ah sida aad rabto, waxay ku dhegan yihiin sawirka sidoo kalena waa laga jari karaa.
Mawduucyada, kama aanan hadlin kuwan ka hor, laakiin iyagu waa matalaad mowduucyo ka kooban lakabka, way noqon karaan dhowr oo waliba waxay ku yaalliin khariidadda.
Waa isku xidhka layers. Tani waxay ku hubaysan tahay mawduucyo kala duwan, sumado, raster. Waxay noqon karaan sawirro si toos ah laakiin laguma talin karo inay isbeddelayaan maaddaama lagu rinjiyeeyay mowduuc ka duwan, taas ayaa la doorbidaa in loogu yeero mowduucyada. Waxaad dooraneysaa waxa korka ku yaal, waxa hufan, midabada midabaynta, xariiqda, dhumucda, weft ... si aan u jeclaanno.
Eeg tusaalaha sawirka hore. Sidan ayaa loo sameeyaa khariidada cagta ee aad ku aragto khariidada bilowga ah. Waxay muujineysaa sida astaamaha, miiska iyo dulucda khariidadda isticmaalka dhulka ee FAO ay ugu yaalliin, oo kuwanna loogu rakibo muuqaalka nooca khariiddada.
Waa bandhigga daabacaadda wuxuuna ku yaal khariiddada. Waad heli kartaa inta badan ee loo baahan yahay, sidoo kale waad madaxbannaan kartaa.
Ahaanshaha muuqaalka muuqaalka, badhamada macnaha guud ee soo socda ayaa la soo bandhigay, oo la mid ah waxa lagu sameeyo Arcmap, kuwa ugu horreeya ayaa loogu talagalay isku dhejinta iyo meeleynta sanduuqyada qoraalka. Kadibna waxaa jira ikhtiyaarrada lagu sameeyo khadadka jiifka ah, xariijimaha toosan, sanduuqa, sanduuqa laga soo qaaday barta dhexe, qoraalka, halyeeyga, calaamadda woqooyi, iyo baarka miisaanka. Laguma muujin baarka laakiin sidoo kale waxaa jira amarro la isku waafajinayo oo la qaybin karo. Ku raran yihiin Qalabyada> u habee> iswaafajinta.
Tusaalaha soo socdaa wuxuu muujinayaa kiiska halyeeyga, waxaa lagu rari karaa si gooni gooni ah ama gudaha xog-ururin. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku kordhiyay xariiq qeybin siman laakiin khadadka tooska ah ayaa sidoo kale lagu dari karaa si halyeeyo looga dhigi karo ballaca.
Marka inkasta oo Manifold uusan keenin wax ka badan shaxanka saboolka ah, shaqada ugu weyni waa isku darka khariidadaha, ka dibna waxay ku jiidayaan xaashida oo ay la qabsadaan dhadhanka. Guryaha (oo leh laba guji) waad dooran kartaa haddii aan dooneyno inay lahaato shabakad isku xirnaanta, haddii aan dooneyno inay noqoto iskudhafyo juquraafi ama UTM la qorsheeyay. Sidoo kale cabirka, astaamaha iyo waqooyiga.
Intaa waxaa dheer waxaad ku dhejin kartaa sawirada sida aan ku sameeyey gaasha geeska iyo sidoo kale Jadwalka Excel ee isku xiran sidii aan ku sameeyay sanduuqa buluuga ah ee hoose.
Sidaa daraadeed, mashruucan, mashruucani wuxuu taageersan yahay qaabab badan, kuwaas oo hubaysan khariidado, kuwan oo ku saleysan mawduucyada iyo miisaaniyadoodu waxay ka muuqdaan lakabyada vector.
Sidoo kale sanduuqyada qoraalka ah waxay yeelan karaan macruuf, sida ku cad muuqaalka soo socda, halka magaciisa, tilmaanta, taariikhda ama mashruuca uu fududeeyo qaabeynta.
Dabcan, mar marka la duudduubay waxaa la isku duubi karaa si loo abuuro mid kale, oo wax laga beddelo xogta xogta laga helayo iyada oo aan la dhisin template-ka xoqan.
Si aad u dirto, midig u guji khariidada oo xulo haddii aad daabacayso, u kaydi sida pdf lakab ah ama muuqaal sare oo xallinta qaab .ems ah. Waxay sidoo kale ku jiri kartaa qaab .ai ah Adobe Illustrator.
Gabagabadii, aad u adag oo soo jiidasho leh. In kasta oo ay qaadaneyso muddo in la fahmo caqligooda.
Post Previous" Hore Nofeembar, 3 munaasabado waawayn oo ku yaal berriga jimicsiga
Post Next Jaangoynta guryaha miyigaNext »